Meicet - Ny mombamomba ny orinasa
Shanghai May Skin Information Technology Co., Ltd. dia mpanome tolotra teknolojian'ny hatsaran-tarehy manan-tsaina izay natokana ho an'ny R&D hatsarana sy ny sehatra Internet of Things Operation.Ny marika "MEICET" dia mifantoka amin'ny fanamboarana sy fizarana fampahalalana momba ny hatsaran-tarehy ara-pitsaboana sy ny famakafakana hoditra nomerika, manolotra serivisy fitaovana manan-tsaina tsara sy vahaolana amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Taorian'ny asa mafy nandritra ny 12 taona, ny orinasa dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny famokarana "fo marina, fisainana marina" mba hiantohana ny kalitao avo indrindra pf isaky ny rohy sy ny singa famokarana azy, manandrana manatsara ny traikefan'ny mpampiasa.
Ny mpanadihady hoditra avo lenta avo lenta maromaro novolavolain'ny MEICET tamin'ny 2013 dia nahazo fikarohana siantifika sy fitsaboana ara-pitsaboana maro na ao an-trano sy any ivelany.
MEICET dia mandray "orientation teknolojia, serivisy ambony indrindra, marika manerantany" ho filozofia ara-barotra, manafaingana ny dingan'ny indostria manontolo hiditra amin'ny vanim-potoanan'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny sehatra Iot.
Miaraka amin'ny fampidirana tonga lafatra ny vokatra, fitaovana, angon-drakitra mpanjifa sy mpandraharaha, dia azo atao ny manara-penitra, ny faharanitan-tsaina ary ny dataization.Ao anatin'ny onjan'ny fiakarana sy ny midina, MEICET dia manohy manao fanavaozana, manangana tontolo iainana ara-barotra mifototra amin'ny teknolojian'ny hatsaran-tarehy marani-tsaina, mampiroborobo ny fampandrosoana ara-pahasalamana sy milamina ny indostrian'ny hatsaran-tarehy.
"Mifantoha amin'ny kalitao, manohy mamorona", mijanona ho marina amin'ny lalana ho avy isika.
Miaraha amin'ny MEICET, ary zarao ny ho avy.
100% QC fisafoana alohan'ny fanaterana
antoka tsara indrindra vidiny
Amin'ny maha-orinasa famokarana tsy miankina amin'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny fitaovana, manana orinasa famokarana manokana izahay, afaka miantoka ny hanome anao ny serivisy mahomby indrindra.
Ekipa tena tsara
Amin'ny maha-orinasa teknolojia antsika dia namorona tsy miankina ny fananana ara-teknolojia lehibe izahay ary nahazo patanty teknolojia
Taorian'ny 12+ taona niasa mafy, ny fampidirana tonga lafatra ny vokatra, ny fitaovana, ny angon-drakitra mpanjifa sy ny mpandraharaha, ny fenitra, ny faharanitan-tsaina ary ny dataization dia azo atao.